(ချားလ် ဒစ်ကင် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
၁၈၃၆တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သော The Pickwick Papersတို့နှင့်အတူ ဒစ်ကင်း၏နာမည်လည်းတရှိန်ထိုး တိုးတက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပင် ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၈၄၃တွင်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သော A Christmas Carol ဝတ္ထုသည် သူ၏အကျော်ကြားဆုံးစာအုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လီယိုတော်စတွိုင်း၊ ဂီးဘတ်ကိတ်ချယ်စတာတန်၊ ဂျော့ချ်အော်ဝဲလ် အစရှိသည့် ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာများကပင် ဒစ်ကင်း၏စာပေများကိုချီးကျူးရသည်အထိပင် ကလောင်စွမ်းပြောင်မြောက်သော ပါရမီရှင်တဦး ဖြစ်ပါသည်။
↑ ရဲကျော်မြင့် (မတ်လ၊ ၂၀၁၇). ကမ္ဘာကျော်(၃၃)ဦး အနှစ်ချုပ်. မဇ္ဈိမစာပေ, ၇၅။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ချားလ်_ဒစ်ကင်း&oldid=471553" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ ဩဂုတ် ၂၀၁၉၊ ၀၁:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။